Ho an'ny kalitaon'ny AASraw, ny teny filamatray momba ny "entana Genius dia hita" dia midika izany. Ho an'ny tompona steroid efa za-draharaha mahandro na manana laboratoara ambanin'ny tany, avy amin'ny bika aman'endrika sy fofona ary toetra amam-batana sasany, dia azon'izy ireo atao ny milaza fa avaratry na ratsy ireo entana. Saingy mba hanampiana amin'ny tanana vaovao, ny akora rehetra avy amin'ny AASraw dia azo antoka amin'ny fahadiovana tsy latsaky ny 98%, ny ankamaroan'ny entana dia amin'ny fahadiovana 99%. Misy ny tatitra momba ny fitsapana HPLC ary ny COA no fanampiana fototra amin'ny fampanantenanay. Ary izahay dia mamporisika ireo mpanjifantsika nividy mba hitsapa ny vovo-dronono avy amin'ny Laboratoara any an-toerana ary afaka mandoa ny sarany mifandraika amin'izany izahay.